चरम आर्थिक संकटमा रोनाल्डिन्हो, सरकारले गर्यो पासपोर्टनै जफत || सुनौलो नेपाल
चरम आर्थिक संकटमा रोनाल्डिन्हो, सरकारले गर्यो पासपोर्टनै जफत
साउन १५ काठमाडौं
एजेन्सी ब्राजिल तथा बार्सिलोनाका पूर्व स्टार फुटबलर रोनाल्डिन्हो चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् । ब्राजिलियन सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारी कर र अन्य ऋण तिर्न नसकेका कारण उनी सरकारको निगरानीमा रहेका छन्। सोही कारण उनलाई सरकारले तत्कालका लागि देश छाडेर बाहिर जानसमेत रोक लगाएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले उनको पासपोर्ट नै जफत गरेको ब्राजिलियन पत्रिका फोल्हा डी साओ पाउलोले समाचार छापेको छ। रोनाल्डिन्होले ब्राजिलको पोर्ताे एलेग्रीस्थित एक तालछेउमा घर बनाएका थिए। सरकारले रोनाल्डिन्होले सो घर निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको ठहर गरी २० लाख ६० हजार पाउन्ड कर लगाएको छ । सरकारले लगाएको कर तिर्न रोनाल्डिन्होले सोही घर बेच्ने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि स्थानिय एक अदालतले सो घरसमेत बिक्री गर्न रोक लगाइदिएको छ ।
अदालतले सो घरसँगै उनको नाममा रहेका ५७ वटा घर बिक्री गर्न रोक लगाएको समाचारमा जनाइएको छ । त्यसबाहेक उनको १७ लाख पाउन्ड अरू ऋण रहेको पनि पत्रिकाले जनाएको छ। सो ऋण उठाउन सरकारी अधिकारीहरूले ताकेता गरिरहेका छन्। फोल्हा पत्रिकाले लेखेअनुसार उनीबाट ऋण असुल नभएसम्म उनको पासपोर्ट फिर्ता गरिनेछैन। अदालतले उनको बारेमा गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न भने मानेको छैन । रोनाल्डिन्होका वकिलले सरकारले उनको सम्पत्तिमाथि रोक लगाएको अस्वीकार गरेका छन्।
उनले पनि अदालतको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनका कारण आफूले त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताएका छन्। ३९ वर्षीय रोनाल्डिन्होले सन् २०१५ मा फुटबलबाट सन्न्यास लिएका थिए। उनी स्पेनी टोली बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दा दुईपटक वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर घोषित भएका थिए। उनले ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट सन् २००२ मा विश्वकप उपाधिसमेत जितेका छन्।
बुध, साउन १५, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटको घोषणा दिपेन्द्र उपकप्तान, कुशल र इशानको इन्ट्री !
साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीे घोषणा, कोको परे टिममा ?
बलात्कारको आरोप लागेपछि आसुँ पुछ्दै रोनाल्डोले के भने ?